Otu esi enweta ọtụtụ Hashtags iji kwalite ọdịnaya YouTube gị - YTpals
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na a ga-etinye usoro nyocha ọchụchọ naanị na ibe weebụ. Otú ọ dị, nke ahụ dị anya site n'eziokwu, dị ka search engine njikarịcha Enwere ike iji usoro n'ọrụ n'elu ikpo okwu ọ bụla. Hashtags dị na YouTube na-eje ozi dị ka ihe dị mkpa maka ịkwalite mbọ njikarịcha search engine. Mgbe ejiri ya nke ọma, hashtags nwere ike inye aka hụ na ọdịnaya vidiyo gị toro elu na nsonaazụ ọchụchọ.
N'afọ a, YouTube wepụtara ihe ọhụrụ akpọrọ The ibe nsonaazụ ọchụchọ hashtag. Njirimara a bu n'obi melite mkpa nsonaazụ ọchụchọ maka ndị na-ekiri ya. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ nwere ike ịchọ vidiyo n'elu ikpo okwu site na iji hashtags na mbụ, kwa, njirimara ọhụrụ ahụ na-enye nsonaazụ akọwapụtara. Algọridim YouTube anaghị ekpebi nke ọma nsonaazụ ọchụchọ nke ibe nsonaazụ ọchụchọ hashtag ọhụrụ na-enye. Site na mmelite a, ọwa ndị ọzọ ga-enweta ohere iji chọpụta n'elu ikpo okwu ma ọ bụrụ na ha na-eji hashtags nke ọma. Yabụ kedu ka ị ga-esi jiri hashtags kwalite ọdịnaya gị? Ka anyị banye n'ime.
Enwere ike kewaa hashtags na YouTube n'ụdị anọ dị iche iche -
Hashtags akọwapụtara: Ndị a nwere hashtags otu okwu na-egosi isi okwu vidiyo.
Nkọwa ma ọ bụ ngwakọta hashtags: Ndị a nwere hashtags ọtụtụ okwu dị ka mkpụrụokwu ọdụ ogologo. Ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta mkpado ogige maka vidiyo gị bụ site na iji rịzọlt a tụrụ aro sitere na mmanya ọchụchọ.
Hashtags izugbe: Ndị a nwere nkebiokwu ma ọ bụ okwu na-akọwa isiokwu vidiyo a.
Asụsụ na-ezighi ezi: Ọtụtụ mgbe, ndị na-ekiri nwere ike ịsụpe mkpụrụ okwu mgbe ha na-achọ vidiyo. Ị nwekwara ike ịgụnye mperi mkpope akwụkwọ maka ịmepụta hashtags ọhụrụ, nke na-eme ka ohere ịchọta gị n'elu ikpo okwu.
Otu esi etinye hashtags na vidiyo gị?
Hashtags bụ mkpụrụokwu nkọwa nke enwere ike ịgbakwunye na vidiyo gị na YouTube ka iwelie visibiliti nke ọdịnaya gị na nsonaazụ ọchụchọ YouTube. Ọ na-enye ndị ọrụ ohere ịchọta vidiyo gị n'ụzọ dị mfe. Ọ dị mkpa iji hashtags ndị a nke ọma iji gbasaa iru gị n'elu ikpo okwu. Algọridim YouTube na-eji hashtags nye nhazi na ọkwa dị mkpa na vidiyo gị. Iji hashtags eme ihe nke ọma abụrụla nke dị oke egwu site na ibe nsonaazụ ọchụchọ hashtag ọhụrụ.
Enwere ụzọ atọ dị iche iche esi agbakwunye hashtags na YouTube -
Na nkọwa vidiyo
N'elu aha: A na-egosipụta hashtags atọ mbụ etinyere na nkọwa vidiyo ebe a
Na aha: Enwere ike iji nke a kama igosipụta hashtags n'elu aha.
Ngwa mkpanaaka nke YouTube na-enyekwa gị ohere itinye mkpado ọnọdụ na vidiyo ndị egosipụtara n'elu aha vidiyo. Mkpado ọnọdụ ndị a anaghị enwe akara hash (#).
Agbanyeghị na enweghị oke na ọnụọgụ hashtags enwere ike ịgbakwunye na vidiyo ọ bụla, enwere mgbochi na mkpụrụedemede. Enwere ike iji mkpụrụedemede 30 kachasị maka mkpado ọ bụla. Mpaghara ederede dị na nkọwa vidiyo na-anabata ihe dị ka mkpụrụedemede 500, gụnyere ndị nkewa.
Ndụmọdụ bara uru maka itinye hashtags na vidiyo gị
1. Tụlee ndokwa a: Mgbe ị na-agbakwunye hashtags iji bulie ọdịnaya gị, ọ dị mkpa idowe isi hashtags na mbido. Nke a na-enye ohere algọridim YouTube ịchọta na hazie vidiyo gị n'ụzọ dị mfe.
2. Itinye ọtụtụ hashtags: Ị ga-ezere ịgbakwunye ọtụtụ hashtags na vidiyo. Ka ọ na-aghọ, ọ na-enyere aka n'ịbawanye visibiliti nke vidiyo gị maka ndị na-ekiri ya.
3. Mepụta mkpado ndabara: Ị nwere ike ịkọwa mkpado ndabara agbakwunyere na vidiyo gị niile. Mkpado ndabara nwere ike inye aka ịbawanye visibiliti nke ọdịnaya gị na nsonaazụ ọchụchọ.
4. Jiri ihe nhazi okwu okwu: Ọtụtụ ngwaọrụ nhazi isiokwu nwere ike inyere gị aka ịchọ hashtags na-ewu ewu. Ị nwere ike iji ngwaọrụ ndị a iji nweta ezigbo ndepụta hashtags dị irè.
Iji nweta echiche ndị ọzọ na YouTube wee hụ na uto nke ọwa YouTube gị, ọ dị mkpa iji hashtags rụọ ọrụ nke ọma. Site n'iji ndụmọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ị ga-eme ka ohere gị dị elu dị elu na nsonaazụ ọchụchọ. Ị nwekwara ike inye aka na uto nke ọwa gị site na iji ọrụ YouTube dị elu nke YTpals na-enye. Ọrụ ndị a nwere ike inye gị free YouTube ngosi, mmasị, na ndị debanyere aha, nke nwere ike ịdị mma maka ịmalite ịmalite ọwa ọhụrụ.
YTpals na-ekwe nkwa nchekwa 100% na ọrụ YouTube niile, yabụ ndị ahịa agaghị echegbu onwe ha maka nzuzo ha. Ọrụ ndị ahịa anyị 24/7 nọkwa ebe a ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere. Iji nweta ọrụ YouTube kachasị elu anyị, kpọtụrụ anyị taa!
Otu esi enweta ọtụtụ Hashtags iji kwalite ọdịnaya YouTube gị nke ndi edemede YTpals, 14 January 2022
Etu esi eweputa ihe ngosi VR nke YouTube ka imepụta ọdịnaya egbu egbu?
VR na-ewu ewu n'etiti ọgbọ ndị na-eto eto, ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ amalitekwara itinye ego na ya. VR enwebeghị ike inweta ya ma bụrụkwa ngwa ọrụ aka dị elu nke etinyere na ya nke ọma, nwere ike ịme…
5 Mmehie Ndị Mbanụ Na -eme Ọhụrụ YouTube Na-eme
YouTube karịrị naanị ikpo okwu maka ịkekọrịta vidiyo- ọ bụ ebe ebidola ọrụ dị iche iche. Site na ndị ọbụ abụ na ndị na-akpa ọchị na ndị na-eme ihe ike, ị bụrụ YouTuber ewetara ọtụtụ ndị mmadụ nnukwu ihe na…